Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 15/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ နာတာရှည် ရောင်ရမ်းနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆစ်များသာမက တခြားအရာများကိုပါ ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ လူတစ်ချိှု၌ ခန္ဓါကိုယ်၏ စနစ်တော်တော်များများကို ပျက်စီးစေပါသည်။ အရေပြား၊ မျက်လုံး၊ အဆုတ်၊ နှလုံးနှင့် သွေးကြော စသည်များ။
ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သော ရောဂါဖြစ်သည့် လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ သင်၏ကိုယ်ခံအားမှ သင့်ခန္ဓါကိုယ်အား မှားယွင်းစွာဖြင့် ပြန်တိုက်သည့်အခါတွင် ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
သာမာန် အရိုးအဆစ်ရောင်ရောဂါနှင့်မတူသည်မှာ လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းသည် အဆစ်များမှ အမြှေးပါးအဖုံးတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဖောင်းကြွလာစေ၏။ ထိုမှ အရိုးကိုလှိုက်စားသွားပြီး ပုံပန်းပျက်ခြင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သော ရောင်းရမ်းခြင်းမှာ ခန္ဓါကိုယ်၏ တခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုပါ ထိခိုက်စေပါသည်။ ဆေးဝါးအမျိုးအစားသစ်များမှာ ရောဂါကို အံ့သြစရာကောင်းအောင် သက်သာစေသော်လည်း ပြင်းထန်သော လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
နာကျင်၊ ရောင်ရမ်း၊ ပူနွေးနေသော အဆစ်များ
မနက်ခင်ပိုင်းနှင့် လှုပ်ရှားမှုမရှိတိုင်း မာတောင့်နေသာအဆစ်များ
မောပန်းလွယ်ခြင်း၊ ဖျားခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း
အစောပိုင်း လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ သေးငယ်သောအဆစ်များ အထူးသဖြင့် လက်ချောင်းမျာ ခြေချောင်းများတွင် အရင်ဖြစ်ပါသည်။ ရောဂါတိုးလာသည်နှင့် လက္ခဏာများမှာ လက်ကောက်ဝတ်၊ ဒူး၊ ခြေကျင်းဝတ်၊ တံတောင်ဆစ်၊ တင်ပါးနှင့် ပုခုံးဆစ်များဆီမှ ပြလာမည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်အများစုတွင် ဘယ်ညာအဆစ်များတွင် တစ်ချိန်တည်းဖြစ်တတ်၏။လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ရောဂါရှိသောလူနာ ၄၀%တွင် အဆစ်များတွင်လက္ခဏာမပြတာမျိုး တွေ့ကြုံရနိုင်သည်။ လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းသည် အဆစ်မဟုတ်သော အစိတ်ပိုင်းများကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများမှာ ပြင်းထန်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ရောဂါအခြေအနေဆိုးလာသော အချိန်ပိုင်းကို ရောဂါထခြင်းဟုခေါ်ပြီး သက်သာလိုက် ဖြစ်လိုက်နှင့် တစ်လှည့်စီဖြစ်တတ်၏။ အချိန်ကြာလာသည့်အခါ လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းသည် အဆစ်များကို ပုံပျက်သွားစေပြီး နေရာမှလွဲချော်သွားစေနိုင်ပါသည်။
သင့်၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာ အဆစ်များ မသက်မသာနှင့် ဖောင်းကြွနေပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းသည် သင်၏ကိုယ်ခံအားမှ ဆိုင်နိုဗီရမ် – အဆစ်ဖုံးအမြှေးပါးကို တိုက်ခိုက်သည့်အခါတွင် ဖြစ်လာပါသည်။
ရောင်ရမ်းမှုကြောင့် ဆိုင်နိုဗီရမ်ထူလာပြီး နောက်ဆုံး အရိုးနုကို ဖျက်စီးပစ်လိုက်ပြီးနောက် အဆစ်အတွင်းမှ အရိုးပါ ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။
အဆစ်များကို ထိန်းပေးထားသည့် အရွတ်များ တွယ်ဆက်တစ်ရှုးများမှာ အားပျော့ပြီး ဆန့်ထွက်လာနိုင်သည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် အဆစ်မှ ပုံစံပျောက်သွားပြီး အလိုင်မန်းမညီဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
ဤရောဂါကိုဘယ်ကစဖြစ်မှန်း မသိရသေးပါ။ မျိုးရိုးဗီဇ လွှမ်းမိုးမှုတော့ ရှိကြောင်းသိထား၏။ မျိုးရိုးဗီဇများက ဒီရောဂါကို တန်းဖြစ်စေခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကြောင့် ဖြစ်နိုင်ချေကို တိုးမြှင့်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ တစ်ချို့သော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုး ကူးစက်များမှာ ဒီရောဂါကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း၏ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
လိင် – အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် ဖြစ်နိုင်ချေပိုများ၏။
အသက် – လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းမှာ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် အသက် ၄၀ နှင့် ၆၀ ကြားတွင် စတင်လေ့ရှိသည်။
မိသားစုမျိုးရိုး – သင့်မိသားစုတွင်း၌ လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်ဖူးလျှင် သင့်၌လည်းဖြစ်နိုင်ချေ ပိုမြှင့်နေပါလိမ့်မည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း – စီးကရက်သည် လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ချေကို များစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် သင့်၌ ရောဂါဖြစ်နိုင်သည့် မျိုးရိုးရှိနေလျှင် ပိုဆိုးပါမည်။ ဆေးလိပ်မှာ ရောဂါပြင်းထန်မှု အမြင့်ဆုံးနှင့်ဆက်စပ်နေ၏။
ပတ်ဝန်းကျင် – သေသေချာချာ မသိရသေးသော်လည်း Asbestos နှင့် Silica တို့လိုပစ္စည်းများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းက ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို များစေ၏။ ကမ္ဘာကုန်သွယ်ညီနောင်တိုက်ကြီး ပြိုကျစဉ်က လုပ်အားပေးခဲ့ကြသော အရေးပေါ်လုပ်သားများတွင် လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းတို့လို ကိုယ်ခံအားမှပြန်တိုက်သော ရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေပိုမြင့်နေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
အဝလွန်ခြင်း – အဝလွန်သူများတွင် တစ်နည်းနည်းနှင့် လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းဖြစ်လာကြောင်း အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် အသက် ၅၅ နှင့်အောက်တွင် ရောဂါရှိကြောင်း သိလာရပါသည်။
Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် လက္ခဏာများမှာ တခြားသောရောဂါများနှင့် ဆင်တူနေသောကြောင့် လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်းအား အတည်ပြုရန် ခက်ခဲ၏။ သွေးစစ်မှုတစ်ခုတည်းနှင့် ရောဂါအား အတည်ပြုနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
စမ်းသပ်စစ်ဆေးစဉ်တွင် ဆရာဝန်သည် အဆစ်များမှ ဖောင်းကြွခြင်း၊ နီမြန်းခြင်းနှင့် ပူနွေးခြင်းတို့ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ Reflexes နှင့် ကြွက်သားသန်မာမှုကိုပါ စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။ တခြားစစ်ဆေးရနိုင်သော test များမှာ –
သွေးစစ်ခြင်းများ – လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ရောဂါရှိသူများမှာ မကြာခဏဆိုသလို သွေးနီဥအနည်ကျနှုန်း (ESR, or sed rate) နှင့် C-reactive protein (CRP) တို့ မြင့်တက်လေ့ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ခန္ဓါကိုယ်၌ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်နေကြောင်း ပြသခြင်းဖြစ်၏။ တခြားသော အလုပ်များသည့် သွေးစစ်မှုများမှာ rheumatoid factor နှင့် anti-cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) ပဋိပစ္စည်းတို့အား ရှာဖွေခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
ပုံရိပ်ဖော်စစ်ဆေးခြင်းများ – အချိန်ကြာလာသည်နှင့် လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာမည့် အဆစ်ပျက်စီးမှုကို ခြေရာခံနိုင်ရန် ဆရာဝန်မှ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ MRI နှင့် တီဗွီဓါတ်မှန်တို့မှာ ရောဂါ၏ ပြင်းထန်နှုန်းအား ခွဲခြားနိုင်ရန် ဆရာဝန်အား ကူညီပေးပါသည်။
Rheumatoid Arthritis (လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းအတွက် အရှင်းပျောက်သောကုသမှုမရှိပါ။ သို့သော် မကြာသေးမီကတွေ့ရှိမှုများတွင် disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) ဟုခေါ်သော ဆေးပြင်းများ စောစောကုသလျှင် သက်သာသည့် အချိန်ကာလ ပိုများနိုင်ကြောင်း ညွှန်ပြထား၏။
ဆရာဝန်ညွှန်မည့်ဆေးများမှာ လက္ခဏာများ၏ အပြင်းအထန်နှင့် ခံစားရကြာချိန်ပေါ် မူတည်ပါလိမ့်မည်။
NSAIDs – စတီးရွိက်မပါသော အရောင်ကျဆေးများမှာ နာကျင်မှုကို သက်သာစေပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ကျစေပါသည်။ အလွယ်ဝယ်ယူနိုင်သော NSAIDs များမှာ ibuprofen (Advil, Motrin IB) နှင့် naproxen sodium (Aleve) တို့ဖြစ်ပါသည်။ ပိုပြင်းသော NDAIDs များကိုသော ဆရာဝန်ညွှန်ကြားမှသာ ဝယ်ယူနိုင်ပါမည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ နားတွင်း တစီစီမြည်နေခြင်း၊ အစာအိမ်နာခြင်း၊ နှလုံးပြဿနာနှင့် အသည်း ကျောက်ကပ် ထိခိုက်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
စတီးရွိက်များ – ကော်တီကိုစတီးရွိက် ဆေးဝါများဖြစ်သော Prdnisone မှာ ရောင်ရမ်းမှုနာကျင်မှုတို့ကိုလျော့ပါးစေပြီး အဆစ်ပျက်စီးမှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အရိုးပါးခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့် ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်မှ ကော်တီကိုစတီးရွိက်များကို ရုတ်တရတ်ထဖောက်ခြင်းများအတွက် အသုံးပြုပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖြတ်ရန်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) – ထိုဆေးများသည် လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းကို နှေးသွားစေပြီး အဆစ်များနှင့် တခြားတစ်ရှူးများ ထာဝရပျက်စီးသွားခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးများသော DMARDs များမှာ methotrexate (Trexall, Otrexup, Rasuvo), leflunomide (Arava), hydroxychloroquine (Plaquenil) and sulfasalazine (Azulfidine) တို့ြုဖစ်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာ အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီး အသည်းထိခိုက်ခြင်း၊ ရိုးတွင်ချဉ်ဆီဖိနှိပ်ခံရခြင်းနှင့် ပြင်းထန်သော အဆုတ်ပိုးဝင်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Biologic agents – biologic response modifiers ဟုလည်းခေါ်သည်။ ထိုဆေးအသစ်များတွင် abatacept (Orencia), adalimumab (Humira), anakinra (Kineret), certolizumab (Cimzia), etanercept (Enbrel), golimumab (Simponi), infliximab (Remicade), rituximab (Rituxan), tocilizumab (Actemra) and tofacitinib (Xeljanz) တို့ပါဝင်၏။ ထိုဆေးများသည် အဆစ်များနှင့်တစ်ရှူးပျက်စီးမှုများကို ဖြစ်ပွားစေသော ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို အဓိကပစ်မှတ်ထားသော ဆေးများဖြစ်ပါသည်။ ထိုဆေးများမှာ ပိုးဝင်နိုင်ချေလည်း မြင့်စေပါသည်။ Biologic DMARDs များကို nonbiologic DMARD ဥပမာ methotrexate တို့နှင့် တွဲပေးသည့်အခါ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
အဆစ်များ ပျော့ပျောင်းနေစေရန်အတွက် ဆရာဝန်မှ သင့်အား ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကုထုံးဆရာနှင့် ပြသရန် အကြံပေးပါ့လိမ်မည်။ ကုထုံးဆရာသည် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် နည်းလမ်းအသစ်များကို လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် အဆစ်များအတွက် လွယ်ကူစေပါလိမ့်မည်။ ဥပမာ – လက်ချောင်းများနာသည့်အခါ လက်ဖျံအားကိုသုံးပြီး ပစ္စည်းများကောက်ယူခြင်းမျိုး။
အထောက်အကူပြုကိရိယာများကလည်း အဆစ်များကိုအားသုံးစေရမည်များကို ရှောင်ကျဉ်ရာတွင် လွယ်ကူစေပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့် မီးဖိုချောင်သုံးဓါးတွင် လွှသွားပုံ လက်ကိုင်တပ်ထားခြင်းက သင့်လက်ချောင်းနှင့် လက်ကောက်ဝတ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ချို့သော buttonhook လို ကိရိယာများကလည်း အဝတ်အစားဝတ်ရာတွင် လွယ်ကူစေပါမည်။
ဆေးများက အဆစ်ပျက်စီးမှုကို မနှေးစေပဲ မကာကွယ်နိုင်လျှင် သင်နှင့်ဆရာဝန်နှစ်ဦးလုံး အဆစ်များကိုပြင်ရန် ခွဲစိတ်ဖို့စဉ်းစားရပါမည်။ ခွဲစိတ်မှုသည် အဆစ်များကို ပြန်အသုံးချနိုင်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။ နာကျင်မှုကိုလျော့ချနိုင်သလို ပုံစံပျက်ခြင်းများကိုလည်း ပြုပြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ လေးဘက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းအား ခွဲစိတ်ရာတွင် အောက်ပါတိုတစ်ခုထက်မက ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
Synovectomy – ရောင်နေသော ဆိုင်နိုဗီရမ်အား ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ Synovectomy ကို ဒူး၊ တံတောင်ဆစ်၊ လက်ကောက်ဝတ်၊ လက်ချောင်းနှင့် တင်ပဆုံဆစ်များတွင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အရွတ်ပြင်ခြင်း – အဆစ်များ ရောင်ရမ်း ပျက်စီခြင်းက အဆစ်တစ်ဝိုက်မှ အရွတ်များကို လျော့ရဲပေါက်ပြဲစေနိုင်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သည် အဆစ်များမှ အရွတ်များကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။
အဆစ်ပေါင်းခြင်း – ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် အဆစ်တစ်ခုအားပေါင်းခြင်းကို အဆစ်အစားထိုးမရနိုင်တော့သည့်အခါတွင် အဆစ်တည်ငြိမ်အောင် အလိုင်းမန်းညီအောင် အနာသက်သာအောင်အတွက် ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ထားပါသည်။
အဆစ်တစ်ခုလုံးအစားထိုးခြင်း – အဆစ်အစားထိုးခွဲစိတ်ရာတွင် ဆရာဝန်သည် သင်၏အဆစ်တစ်ခုလုံးအား ဖယ်ထုတ်ပြီး လူလုပ် သံနှင့်ပလက်စတစ်အဆစ်ကို အစားထိုးထည့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်မှုကြောင့် သွေးထွက်လွန်ခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်းနှင့် နာကျင်မှုတို့လည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ခွဲစိတ်ရန် အကျိုးနှင့်အပြစ်များကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက လေးဖက်နာကဲ့သို့အဆစ်ရောင်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်း ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ။ ညင်သာသော လေ့ကျင့်ခန်းများက အဆစ်တစ်ဝိုက်မှ ကြွက်သားများကိုသန်မာစေပြီး သင်ခံစားရနိုင်သည့် မောပန်းလွယ်မှုကို အနိုင်ယူနိုင်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ စလုပ်မည်ဆိုပါက လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်စပါ။ ရေးကူးတာမျိုး ရေကူးကန်အေရိုးဗစ်မျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ နာကျင်သော၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရထားသော၊ အလွန်အမင်းရောင်နေသောအဆစ်များနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မိခြင်းကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
အပူအအေးကပ်ပါ။ အပူသည် နာကျင်မှုကိုလျော့ပါးစေပြီး တင်းမာနာကျင်နေသော ကြွက်သားများကို ပြေလျော့စေပါသည်။ အအေးသည် နာကျင်မှုကို ထုံသွားစေပါသည်။ အအေးသည် ထုံကျင်မှုကိုဖြစ်စေပြီး ကြွက်သားတောင့်ခြင်းများကို လျော့ပါးစေပါသည်။
စိတ်ဖြေလျော့ပါ – စိတ်ဖိစီးမှုးများကို လျော့ချခြင်းဖြင့် နာကျင်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေပါ။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ စိတ်အာရုံလွှဲခြင်း၊ ကြွက်သားများ ပြေလျော့စေခြင်းတို့လို နည်းစနစ်များက နာကျင်မှုကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
တစ်ချို့သော ဖြည့်စွက်စာများ တစ်လှည့်စီကုထုံးများကလည်း လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။
ငါးအဆီ – တစ်ချို့သောလေ့လာမှုများအရ ငါးအဆီမှာ လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းမှ နာကျင်မှုနှင့် တောင့်တင်းမှုကို လျော့ချပေးသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် ပျို့ခြင်း၊ ပါးစပ်တွင် ငါးအနံ့နံနေခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ငါးအဆီသည် ဆေးဝါးများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။
အပင်ထွက်ဆီများ – evening primrose, borage နှင့် black currant အပင်များမှ အဆီများတွင် လေးဖက်နာကဲ့သို အဆစ်ရောင်ခြင်းမှနာကျင်မှုနှင့် မနက်ခင်း တောင့်တင်းမှုများကို သက်သာစေသော အဆီအက်စစ်များပါဝင်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေဖြင့် ပျို့ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ လေချဉ်တက်ခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အပင်ထွက်အဆီသည် အသည်းကို ထိခိုက်စေပြီး ဆေးဝါးများကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ဆရာဝန်နှင့် အရင်တိုင်ပင်ပါ။
ထိုက်ချိ – ညင်သာသော လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အကြောဆန်ခြင်းများအား အသက်ပြင်းပြင်းရှုခြင်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူအများမှာ ထိုက်ချိကိုသုံးပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျော့ချနေကြပါသည်။ လေ့လာမှုအသေးစားများတွင် ထိုက်ချိသည် လေးဖက်နာကဲ့သို့ အဆစ်ရောင်ခြင်းမှ နာကျင်ခြင်းများကို လျော့ချနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သောဆရာနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းက ထိုက်ချိလုပ်ရာတွင် အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ သို့သော် နာကျင်စေသော လှုပ်ရှားမှုများကိုတော့ မလုပ်ပါနှင့်။
1. Rheumatoid Arthritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rheumatoid-arthritis/home/ovc-20197388. Accessed 13 Feb 2017
2. Rheumatoid Arthritis. http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Rheumatoid-Arthritis. Accessed 13 Feb 2017
သွေးလေးဖက်နာ ရှိသူများအတွက် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်အချက်များ